အလိုအလျောက်ပိုက်ပိုက် အစုအဝေးနှင့် ကြိုးစည်း/ပိုက်စည်း/ပိုက်ထုပ်ပိုးလိုင်း
ဘာသာစကား အဂၤလိပ္အဘိဓါန် Arabicတရုတ္ ဒတျချြ ပြင်သစ်ဂျာမန်ဟိန်အီတလီ ဂျပန်ကိုရီးယားပေါ်တူဂီ ရုရွားစပိန္ဟီဘရူး ဗီယက်နမ်ထိုင်းအဘိဓါန် Malayalam
ဘာသာစကားများကို Select လုပ်ပါ အဂၤလိပ္အဘိဓါန် Arabicတရုတ် (မျက်မှောက်ရေးရာ)ဒတျချြ ပြင်သစ်ဂျာမန်ဟိန်အီတလီ ဂျပန်ကိုရီးယားပေါ်တူဂီ ရုရွားစပိန္ဟီဘရူး ဗီယက်နမ်ထိုင်းအဘိဓါန် Malayalam
ပင်မစာမျက်နှာ ထုတ်ကုန်များ စျေးကွက်များ ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်း ဆက်သွယ်ရန် ထောက်ပံ့
Semiauto pallet ထုပ်ပိုးစက်
အလိုအလျောက် Pallet ဆန့်ထုပ်ပိုး
orbital wrapper ကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။
ပိုက်နှင့် Tube ထုပ်ပိုးမှုလိုင်း
Cable coiling packing လိုင်း
အလျားလိုက် အလိုအလျောက် ကွိုင်
ဒေါင်လိုက် အလိုအလျောက် ကွိုင်
Steel Tube နှင့် Pipe Packing Solutions
အလိုအလျောက်သံမဏိပြွန်ထုပ်လုပ်စက်၊ ထွားကျိုင်းစက်၊ အဝင်နှင့်အထွက်နို့တိုက်ကျွေးရေးစနစ်ရှိသည်။
FHOPE သည် အလိုအလျောက်ပိုက်ပိုက်ထုပ်ပိုးခြင်းလိုင်းဖြင့် အမျိုးမျိုးသောစက်မှုစတီးလ်ပိုက်များနှင့် ပြွန်ကိုင်တွယ်ကိရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ Tube bundling (pipe bundling), steel pipe, copper tube, stainless steel tube strapping, tube packing and stacking အစရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များစွာတွင် ပိုက်ပိုက် ကိုင်တွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိရိယာများ။ ဆဋ္ဌဂံ သို့မဟုတ် စတုရန်းအရွယ်အစားရှိသော အဝိုင်း၊ စတုရန်းနှင့် စတုဂံပြွန်ကဲ့သို့သော ပိုက်ထုပ်ပိုးမှုပုံစံအမျိုးမျိုးကို ရရှိနိုင်သည်။ အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ထွားကျိုင်းခြင်း ရွေးချယ်စရာများ ရရှိနိုင်သည်။ FHOPE သည် အလိုအလျောက် ရေတွက်သည့် ကိရိယာ၊ အလွှာလွှင့်စက်၊ ခက်ရင်းထရပ်ကား သို့မဟုတ် overhead ကရိန်းဖြင့် ကောက်ယူရန်အတွက် ကြိုးနှင့်ပတ်ထားသော အစုအဝေးများကို စုပြုံစုဆောင်းရန်အတွက် အလိုအလျောက် လိုက်ပို့ကိရိယာများကို အသုံးပြုသည်။
မတူညီသော သံမဏိပြွန်တစ်ခုအတွက် သင့်လျော်သော ထုပ်ပိုးမှုလိုင်းကို ရွေးချယ်ရန်အတွက်၊ အစုလိုက်အစည်းလိုက်ခြင်းနည်းလမ်းတွင် မတူညီသော ဖြေရှင်းချက်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးရှိသည်။
ဤအမျိုးအစား ထုပ်ပိုးမှုလိုင်းသည် ပိုက်ရုတ်သိမ်းခြင်းနှင့် အစုအဝေးစုပုံခြင်းအတွက် forkarms ကို ရွေးချယ်သည်။ သံမဏိပြွန် OD>32mm အတွက် ရွေးချယ်မှုကောင်းသည်။ ပိုက် OD<32mm ကြောင့် manually assistant မပါဘဲ အတွဲလိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ကောင်းတစ်ခု ဖန်တီးရန် မလွယ်ကူပါ။
ပိုက်အရှည်အလိုက် forkarm နံပါတ်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ နှင့် "ဆဋ္ဌဂံ၊ စတုရန်းပုံ၊ စတုဂံပုံသဏ္ဍာန်" အတွက် ရနိုင်သော စတီးပြွန်အတန်းစုစနစ်
2) ပုံသဏ္ဍာန်စက်သည် မတူညီသောအစုအဝေးပုံသဏ္ဍာန်အလိုက် ချိန်ညှိနိုင်သည်။
3) တွန်းခြင်းဖြင့် tube သည် bundling အနေအထားသို့ရွှေ့ပါ။
4) tube stacking stopper သည် တွန်းထုတ်သည်၊
5) Tube bundling stopper သည် တွန်းထုတ်ပြီး tube အတန်းကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချုပ်ထားသည်။
6) ခက်ရင်းများကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
7) tube bundling stopper သည် tube bundle ကို ကောင်းမွန်စွာ လျော့ရဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် တွန်းထုတ်ပါသည်။
၎င်းသည် သံလိုက်မဟုတ်သော လျှပ်ကူးနိုင်သောပြွန်များကို ကိုင်တွယ်ရန်အတွက် ရွေးချယ်ထားသော အလူမီနီယမ်ပြွန်၊ သံမဏိပြွန်၊ ကြေးနီပြွန်၊ သတ္တုစပ်စတီးလ်ပြွန်၊
B. MEGNET အမျိုးအစား အစုအဝေး STACKER
ဤအမျိုးအစား ထုပ်ပိုးမှုလိုင်းသည် ပိုက်ရုတ်သိမ်းခြင်းနှင့် အစုအဝေးထည့်ခြင်းအတွက် megnet stacking စက်ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် မည်သည့်အမျိုးအစားအတွက်မဆို လုပ်ဆောင်နိုင်သော megnet chamber နှင့် crame type lifter တို့ပါဝင်သည်။ သံလိုက်လျှပ်ကူးမှု steel tube သည် မည်သည့်ဘက်နှင့်မဆို။ ပြွန်တစ်ချောင်းကို သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။
တစ်ခုအားဖြင့် alignment roller နည်းလမ်းမှ tube-layer forming position သို့။ "ဆဋ္ဌဂံ၊ စတုရန်းပုံ၊ စတုဂံပုံသဏ္ဍာန်" ဖြင့် သံမဏိပြွန်အတန်းစည်းစနစ်အား ပံ့ပိုးပေးသည့် ပိုက်အရှည်အလိုက် megnet lifter နံပါတ်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
အစုအစည်း stacking လုပ်ငန်းစဉ်သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမျိုးအစား stacker နှင့် ဆင်တူသည်။ အလွှာကိုဖွဲ့စည်းအိပ်ရာထဲသို့ထည့်ပြီးနောက်၊ ပထမဦးစွာ၊ အချို့သောနည်းပညာဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲအရာ- Tubes အလိုအလျောက်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိရိယာအတွက် အိပ်ရာသည် ကျဆင်းသွားပါသည်။
ပိုက်ပိုက်ထုပ်ပိုးခြင်းလိုင်းသည် ပိုက်ဆဋ္ဌဂံပုံသဏ္ဍာန်စက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းစနစ်ဖြစ်သည်။အစာကျွေးကိရိယာ၊ အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးခြင်း။ စက်၊ ထွားစက်၊ ပိုက်လိုင်း စသည်တို့သည် ပိုက်၊ ပိုက်ထုပ်များထုပ်ပိုးခြင်းအတွက် ထိရောက်သော၊ အဆင်ပြေပြီး ဘေးကင်းသော ထုပ်ပိုးသည့် စက်ကိရိယာအစုံဖြစ်သည်။
သံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ပိုက်ပိုက်များ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ချည်နှောင်ခြင်းစက်။ ဤအလိုအလျောက်ပိုက်ပိုက်ထုပ်ပိုးခြင်းလိုင်းကို မတူညီသောလုပ်ငန်းများနှင့် မတူညီသောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများတွင် အောင်မြင်စွာအသုံးချခဲ့သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် မြင့်မားသော နည်းပညာအဆင့်သို့ ရောက်ရှိစေသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Fhope အင်ဂျင်နီယာများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဦးဆောင်နေသော လုပ်ငန်းများနှင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပိုက်ပိုက်များ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ထွားကျိုင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်။ ပိုက်ထုပ်ပိုးခြင်းနည်းပညာနယ်ပယ်တွင် ပိုက်များကို ထုပ်ပိုးသယ်ယူရာတွင် ထိရောက်စွာထုပ်ပိုးမှုသေချာစေရန်အတွက် ဖန်တီးထားပါသည်။ ၎င်း၏လုပ်ငန်းတွင်၊ Fhope အင်ဂျင်နီယာသည် ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များရှိ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပိုက်ပြွန်ထုပ်ပိုးမှုနှင့် ထွားကျိုင်းမှုဖြေရှင်းချက်အားလုံးကို အကဲဖြတ်သည်။
ပိုက်ထုပ်ပိုးစက် ပိုက်ထုပ်ပိုးစက် ပိုက်ထုပ်ပိုးစက်။
1. ပိုက်အရှည် ၊ ပိုက် OD နှင့် ပိုက်ထုပ် OD တို့၏ ထုပ်ပိုးမှုအကွာအဝေးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း
2. စက်ရုံတွင် ရနိုင်သောနေရာကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းလိုင်းကို ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ခြင်းလိုင်းသို့ မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်ကို စစ်ဆေးခြင်း။
3. ပိုက်ထုပ်၏ လမ်းကြောင်းနှင့် ဦးတည်ချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
4. အစုအဝေးကိုင်တွယ်နည်းနှင့် သိုလှောင်မှုနေရာကို စီစဉ်ပါ။
5. အလိုအလျောက်စနစ်လိုအပ်သောအဆင့်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့်၊ မြင့်မားသောအဆင့် အလိုအလျောက်စနစ်သည် အနာဂတ်ထုတ်လုပ်မှုတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လေးလံသော စတီးလ်ပိုက်နှင့် အတွဲလိုက်ကြောင့် လူစွမ်းအားဖြင့် ကိုင်တွယ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။
6. လိုအပ်သော ထုပ်ပိုးမှုပန်းတိုင်ကို စစ်ဆေးခြင်း- သိုလှောင်မှုအတွက်၊ domenstc သို့မဟုတ် ပင်လယ်ရပ်ခြားဈေးကွက်အတွက်... စတီးပိုက်အတွဲလိုက်အတွက် မတူညီသော ထုပ်ပိုးနည်းကို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ အထုပ်အချို့သည် ထွားကျိုင်းရန် လိုအပ်နိုင်သည်၊ အချို့သော ထုပ်ပိုးမှုများသည် ထုပ်ပိုးရန် လိုအပ်ပါသည်...
7. ဖြစ်နိုင်ခြေကို အကောင်းဆုံးနားလည်နိုင်စေရန် ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း။
8. တပ်ဆင်မှု၊ ခန့်အပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအပြီးတွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မေးမြန်းပါက၊ ပြဿနာကို လွယ်ကူစွာရိုက်ကူးနိုင်စေရန် ထိန်းချုပ်စနစ်တွင် ရိုမိုထိန်းချုပ်မှုပုံစံတစ်ခုကို ထည့်သွင်းခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။
Tube & Pipe ထုပ်ပိုးမှုလိုင်း
အလိုအလျောက်သံမဏိပိုက်ထုပ်ပိုးထွားကျိုင်းထုပ်ပိုးလိုင်းA.Auto Steel Pipe Bundle Strapping Packing Line ထုတ်ကုန်ပုံသဏ္ဍာန် : အဝိုင်း၊ စတုရန်း amp; Rectangular Size : Round Min Ø 114.3 mm ~ max Ø323.9 mm : Square Min 90 x 90 mm ~ Max 250 x 250 mm : Rectangular 80 x 100 mm ~ max 200 x 300 mm Thickness : 3.0 mm x အတွဲလိုက်အရွယ်အစား : 12.7 mm x 450 mm အနံ Min 1100 mm ~ Max3mm : ဆဋ္ဌဂံ အမြင့် Min XNUMX...
အလိုအလျောက်ပိုက်အငူထည့်သွင်းစက်ဒီဇိုင်းပုံဆွဲခြင်း Originality ： လက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းအခြေအနေ ： ထုပ်ပိုးထားသောစက်သည် ပိုက်ထုပ်၏ ဂျီဩမေတြီပုံသဏ္ဍာန်တွင် မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များ ရှိသည်၊ ဦးထုပ်သည် ဖလက်ရှ်မပါဝင်နိုင်ပါ၊ ထုပ်ပိုးမှုနှုန်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 1-5% ဖြစ်သည်။ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများစွာ ပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၏ ပထမဆုံးသော အဖွင့်နှင့် အပိတ် ဦးထုပ်ကိရိယာကို တီထွင်ခဲ့သည်၊ ...
အဝိုင်းနှင့် စတုဂံ pi အတွက် အလိုအလျောက် စတီးလ်ပိုက်တန်းစီခြင်း။အဝိုင်းနှင့်စတုဂံပိုက်များအတွက် အလိုအလျောက်စတီးလ်ပိုက်ထုပ်ပိုးခြင်းလိုင်းတွင် အစုအစည်းပြုလုပ်ရန်အတွက် အလိုအလျောက်သံမဏိပိုက်စုပုံစက်၊ အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးထားသော အစာကျွေးခြင်းနှင့် သိုလှောင်မှုစနစ်ပါရှိသော စတီးပိုက်စည်းစက်တို့ ပါဝင်သည်။
အော်တိုမက်တစ်စတီးလ်ပိုက်ထုပ်ပိုးလိုင်း | သံလိုက်သံမဏိပြွန်ပိုက်များကို ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းလိုင်းစက် FHOPE Bundling Station လက်ကိုင်များနှင့် ထုပ်ပိုးထားသော ပိုက်များ သို့မဟုတ် အခေါင်းပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အပိုင်းများကို ထုတ်ကုန်အရွယ်အစားအလိုက် ပုံစံထုတ်ထားသော အရွယ်အစားအတိုင်း အစုအဝေးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သည်။ လိုင်းအား အပြည့်အဝအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပြီး ထိတွေ့မျက်နှာပြင်အော်ပရေတာဌာနမှ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ Bundling machine သည် ပရိုဂရမ်ကို တည်ဆောက်သည်...
FHOPE အလိုအလျောက်သံမဏိပြွန်ထုပ်ပိုးစက်အလိုအလျောက်သံမဏိပိုက်/ပြွန်အိတ်ထည့်သည့်စက်နှင့်အတူ ထုပ်ပိုး/ကြိုးဖြင့် အိတ်ထဲသို့ပိုက်ဖြည့်ရန် စက်။ ၎င်းသည် stainless steel tube, pve pipe, aluminium profile များအတွက်အလုပ်လုပ်သည် ......
အလိုအလျောက်သံမဏိပြွန်ထွားကျိုင်းစက်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ထွားကျိုင်းခြင်းအတွက် အလိုအလျောက်သံမဏိပြွန်ထုပ်ပိုးမှုဖြေရှင်းချက်အတွက် တရုတ်ထုတ်လုပ်သူသည် semiauto နှင့် အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက် ......
အလိုအလျောက်ပိုက်ပိုက်များ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ကြိုးစည်းခြင်းတရုတ်အလိုအလျောက်သံမဏိပိုက်/ပြွန် အတွဲ/စည်းကြိုးလိုင်းသည် ပိုက် သို့မဟုတ် ပြွန်ထုပ်ပိုးခြင်းအတွက် အလိုအလျောက် ပိုက်ကိုင်တွယ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ပိုက်စည်းကိရိယာများ၊ ချည်နှောင်ခြင်း၊ စည်းခြင်း ......
Fhope Businesses သည် အမှန်တကယ်တွင် ပိုက်စည်ကို အဓိကထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ ထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးစက်၊ ပိုက် tbue bundling၊ tube ထွားကျိုင်းစက်၊ အခြားထုပ်ပိုးသည့်ကိရိယာများနှင့်အတူ။ ၎င်းသည် ပိုက်ထုတ်ပစ္စည်းများကို လျှော့ချ၍ ထွားကျိုင်းစက်၊ ဖလင်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးထားသော ကိရိယာများ အပြည့်အစုံ စုစည်းမှု ပါဝင်သည်။ Fhope သည် အခြေခံ PE ဖလင်အိတ်နှင့် ယက်အိတ်ထုပ်ပိုးခြင်းမှသည် ပိုက်အိတ်အမျိုးအစား တစ်ခုလုံးကို အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် နှင့် ကျပန်းအတိုင်းအတာ ပိုက်ထုပ်ပိုးခြင်းအထိ ထုတ်လုပ်ပါသည်။
လုပ်သားကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်အတွက် အလိုအလျောက် သံမဏိပိုက်လိုင်းများ ထုပ်ပိုးထားသည်။ ၎င်းသည် ဆဋ္ဌဂံ၊ စတုရန်းပုံ၊ တြိဂံ၊ စတုဂံပုံသဏ္ဍာန်တို့ကို ထုပ်ပိုးရန်ဖြစ်သည်။ အရှည်ပေါ်မူတည်၍ မျဉ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။
အလိုအလျောက် သံမဏိ ထွားကျိုင်းစက် Tension Force 15,572 – 19,576 N Control Mode မှ အလိုအလျောက်၊ semi-automatic မှ manual အထိ။ အစုအစည်း Shape Hexagon၊ စတုရန်း၊ တြိဂံ၊ trapezoid အတွက် ကြိုးပတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
အလိုအလျောက်သံမဏိပိုက်အိတ်အိတ်ထည့်စက်သည် ပိုက်များကို အိတ်ထဲသို့ဖြည့်ပေးနိုင်သည်။ ထုပ်ပိုးမှုအမြန်နှုန်းသည် တစ်မိနစ်လျှင် 70m အထိရှိသည်။ POF/OPP ရုပ်ရှင်နှင့်အတူ။ အွန်လိုင်း ပိုက်အိတ်ထုပ်ပိုးခြင်းအတွက် tube feeding system နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။
၎င်းသည် pvc ပြွန်၊ PPR၊ Upvc ပိုက်... အစုအဝေးပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးသည့်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလိုအလျောက်ပိုက်နံပါတ်ရေတွက်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ထွားကျိုင်းခြင်း... ၎င်းကို အွန်လိုင်းထုပ်ပိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် extruder နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။
ပိုက်ထုပ်ကို အိတ်ထဲသို့ အလိုအလျောက်ဖြည့်ပေးသည်။ PE အိတ်ထုတ်ခြင်းဖြေရှင်းချက်နှင့် ယက်အိတ်ထုတ်စက် နှစ်မျိုးလုံးကို သုံးစွဲသူ၏ လိုအပ်ချက်အလိုက် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။ Package တွင် သင့်လုပ်အားကုန်ကျစရိတ်ကို များစွာသက်သာစေပါသည်။ ယက်အိတ်ကို စက်ဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။
အထူးသဖြင့် အလှဆင်ခြင်းအတွက် ပိုက်များအတွက် အလိုအလျောက် တစ်ခုတည်းသော ပိုက်အိတ်ထုပ်ပိုးခြင်း ဖြေရှင်းချက်။ သံမဏိပိုက်ကို တစ်ကြိမ်လျှင် 10 pcs သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ တန်းစီကာ ထုပ်ပိုးနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ သံမဏိပိုက်ထုပ်ပိုးခြင်း ဖြစ်သည်။
Fhope ပိုက်များကို ထုပ်ပိုးခြင်းနည်းလမ်းများကို ပလတ်စတစ်နှင့် စတီးလ်ပိုက်ပိုက်များအပြင် အခြားသော tube များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းများပါရှိသော ကဏ္ဍများအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ Fhope သည် ပိုက်ပိုက်များ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ထွားကျိုင်းခြင်းများကို ငါးနှစ်ကျော် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ထုပ်ပိုးမှုစနစ် ၅၀ ကျော်ရှိသည့် သံမဏိကုမ္ပဏီအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် လုံး၀ထုတ်လုပ်ထားသည်။
* E-mail ကို
© Fhope Machinery Co.,Ltd | မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး